တရုတ်ကြွေပျံ့, အမွှေးအကြိုင်ပျံ့, ကြွေရေနံပျံ့ပေးသွင်း
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:ကြွေပျံ့,အမွှေးအကြိုင်ပျံ့,ကြွေရေနံပျံ့,ကြွေမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ကြွေပျံ့
ကြွေပျံ့ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ကြွေပျံ့, အမွှေးအကြိုင်ပျံ့ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ကြွေရေနံပျံ့ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံးကြွေထည် Nebulizing Ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့
ကြွေထည်မီးအိမ် Aromatherapy ရေနံပျံ့လူငယ်လူနေမှု
အမွှေးနံ့သာ Nebulizer ကြွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပျံ့နှံ့အနက်ရောင်
မျက်မှောက်ခေတ်ကြွေထည်ပစ္စည်း Ultrasonic မွှေးကြိုင်သောအနံ့စုပ်စက်
100ml ကြွေ Ultrasonic ရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့
White Aroma ကြွေထည်မြေထည်အိန္ဒိယယူကေစင်ကာပူ
Led အလင်းကြွေ Air ကိုအနံ့ပျံ့မရှိမဖြစ်ရေနံ
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၂၆၈ * ၂၀၂ * ၁၂၅mm; မာစတာပုံး: 62.5 * 55.5 * 27cm / 12PCS
အကောင်းဆုံးကြွေထည် Nebulizing Ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ သင်၏နေအိမ်ဘဝကိုစိုထိုင်းသောနှင့်လတ်ဆတ်စေပြီးခြောက်သွေ့ခြင်းမရှိသောသက်သောင့်သက်သာရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုလုံခြုံစေပြီးဆူညံသံကင်းသော၊ တိတ်ဆိတ်။ မွှေးကြိုင်သောအပြင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကင်းသောအိပ်စက်ခြင်းကိုဆောင်ကြဉ်းပေးမည်။...
ကြွေထည်မီးအိမ် Aromatherapy ရေနံပျံ့လူငယ်ဘဝ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝများသည်မိုးလုံလေလုံအပူချိန်ချိန်ခွင်လျှာကိုရရှိရန်ဆောင်းရာသီတွင်အပူနှင့်နွေရာသီတွင်လေအေးပေးစက်အပေါ်မှီခိုနေရသည်။...
အမွှေးနံ့သာ Nebulizer ကြွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပျံ့နှံ့အနက်ရောင် လူများသည်အိမ်သည်လေနှင့်မိုးရွာရန်နေရာ၊ နူးညံ့သောအပြင်ရှိဆူညံသောဆိပ်ကမ်းဖြစ်ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိခြင်းကိုအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါအမြဲလိုလိုပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိသောအိမ်ငယ်လေးတွင် [ultrasonic] [aroma humidifier]...
ကြွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီအမွှေးဓာတ်ပျံ့နှံ့ခြင်း အိမ်ထဲမှာ humidifier သုံးဖို့လိုပါသလား? နွေ ဦး နှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီများတွင်အိမ်၌ aromatherapy humidifier တပ်ဆင်ထားသောကြောင့်လေထုအတွင်းပိုင်းစိုထိုင်းဆကိုထိရောက်စွာတိုးတက်စေရုံသာမကငြိမ်သက်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုပါဖယ်ထုတ်ပေး။ အသက်ရှုစေနိုင်သည်။...
အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ လတ်ဆတ်သောသဘာဝ, သဘာဝလက်ခံ။ ကျန်းမာသောနေထိုင်မှုသည်အိပ်စက်ခြင်းမှလာသည်။ အဲဒါနှင့်အတူ, အိပ်မပျော်ဖို့နှုတ်ဆက်ဟုပြော! သက်သောင့်သက်သာဘဝသည်ရနံ့ကုထုံးဖြင့်မခွဲမခွာ! ရင်ခုန်စရာနှင့်အပန်းဖြေဘဝကိုမြည်းစမ်းပါ သာယာသောခံစားချက်, ပျူငှါနွေးထွေးသောနှင့်ရင်ခုန်စရာ။...
diffuser မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံရနံ့အိပ်စက်ခြင်းသည် ဤ "aromatherapy humidifier" သည်ဈေးမကြီးသည့်အပြင်ဘဝ၏ပျော်ရွှင်မှုကိုချက်ချင်းတိုးတက်စေနိုင်သည့်အမြင်အာရုံနှင့်အရသာတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်တန်ဖိုးမြင့်မားရုံသာမကအနံ့နှင့်သန့်စင်သောရနံ့ကုထုံး၏သက်သာစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းခံစားနိုင်သည်။...
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံနှင့်အတူအဖြူရောင်ကြွေရနံ့ကုထုံးပျံ့ အရသာသည်အိမ်၏သီးသန့်အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ ဘ ၀ ၌လူများစွာသည်သူတို့၏ထူးခြားသောကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးရန်ရနံ့ကုထုံးကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်အလှဆင်ခြင်းအရအကြိုက်ဆုံး [Aroma Diffuser]...
လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအနုပညာဒီဇိုင်းလျှပ်စစ်ကြွေထည်အမွှေးအကြိုင်ပျံ့ သင်သည်သင်၏အသားအရေခြောက်သွေ့သည်ဟုခံစားရသောအခါအစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းရန်၎င်းကိုခဏ ထား၍ သင်အရေပြားပြောင်းလဲသွားသည်ကိုချက်ချင်းခံစားရလိမ့်မည်။ သင်အိမ်၌ရှိနေစဉ် aromatherapy လုပ်ဆောင်မှုကိုဖွင့်ပြီးသင့်ကိုမွှေးရနံ့ကိုဝိုင်းထားပါ။...
Ultrasonic ကြွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ကြွေထည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုထည့်ပေါင်းခြင်းသည်ရနံ့ကုထုံးမော်လီကျူးများအားသဘာဝအနုစိတ်ဖြာထွက်စေသောအမွှေးအကြိုင်နှင့်ပြည့်နေသောအခန်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားစေသည်။ 2.4MHz ultrasonic atomization, nanometer အခိုးအငွေ့။...
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ခုနှစ်တွင်ထွင်းထုကြွေ Plug ကြော့ရှင်းသောဒီဇိုင်း - ကြွေပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဒီဇိုင်း၊ အိမ်အလှဆင်မှုအတွက်ပိုမိုသင့်လျော်သည်။ ဆီဖြန့်ရုံသာမကအနုပညာလက်ရာတစ်ခုလည်းရှိသည်။ ကြီးမားသောစွမ်းရည် - အန္တရာယ်ရှိသော PP၊ ABS, PC နှင့် Ceramic...
ကြွေဖြူအိတ်ဆောင်ရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ ၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကိုဖြေလျော့ပေးပြီးစိတ်ကိုဖြေလျှော့ပေးသောကြောင့်မွှေးကြိုင်သောကုသမှု၏ ၀ မ်းမြောက်မှုကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၁၀၀ မီလီမီတာရှိသောရေနှင့်ပြည့်နိုင်သည့်ကြီးမားသောစွမ်းရည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံဖြန့်စက်သည် ၃ နာရီမှ ၃၅...
ကြွေရနံ့ရေနံလေထုပျံ့လတ်ဆတ်သောရနံ့များ ultrasonic နည်းပညာဖြင့်စွမ်းအင်ပေးသောဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီဖြန့်စက်ကို အသုံးပြု၍ မွှေးကြိုင်သောအမွှေးအကြိုင်များဖြင့်ဝန်းရံထားပါ။ ၎င်းသည် Ultrasonic...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 202 268 * 125mm; မာစတာစက္ဏူထူ: 62.5 * ငွေကြေး 55.5 * 27cm / 12PCS
မရှိမဖြစ်ဆီသည်ကြွေမူလစာမျက်နှာမွှေးအကြိုင်ပျံ့ လွယ်ကူရှင်းလင်း & သဘာဝ DESIGN: အဆိုပါ Dituo မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ကြောင့်ထူးခြားတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုအဘို့ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည်ရာကိုမဆိုအလှဆင်, သို့ချောမွေ့စွာရောနှောနေခြင်းမှထွင်းထု, အနုပညာတစ် Fine Piece ဖြစ်ပါတယ်။ THE...
မျက်မှောက်ခေတ်ကြွေထည်ပစ္စည်း Ultrasonic မွှေးကြိုင်သောအနံ့စုပ်စက် Dituo တွင်သင့်နေထိုင်မှုနှင့်အလုပ်နေရာကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးမြင့်မြတ်သောခိုလှုံရာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်သင်လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောကိရိယာဖြင့်သင့်အားတင်ပြခွင့်ရသည်။ Dituo အား“ ကြွေထည်ပစ္စည်းပျံ့နှံ့ခြင်း” ကိုအဘယ်အရာကပြိုင်ဆိုင်မှုမှထူးခြားစေသနည်း။...
100ml ကြွေ Ultrasonic ရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်မီသောအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်ကြွေထည်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ရနံ့ကုထုံး၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင့်အိမ်သို့ယူဆောင်လာပါ။ ကြွေထည်မြေထည်သုံးစက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အပန်းဖြေမှုနှင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုခြင်း၊...
White Aroma ကြွေထည်မြေထည်အိန္ဒိယယူကေစင်ကာပူ ရှင်းလင်းရန်နှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေရန် - သန့်ရှင်းရန် - လိုအပ်သောအခါသင့်ကြွေပျံ့နှံ့မှုမျက်နှာပြင်ကိုသန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာနူးညံ့သောအ ၀ တ်အထည်ကိုအသုံးပြုပါ။ ရေလှောင်ကန်ကိုအနည်းဆုံး ၂ ပတ်တစ်ကြိမ်ဖျက်ပစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ သင်၏အသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်၍ ၂ ပတ်မှ ၂...
အလိုအလျှောက် Shut-ပယ်ကြွေပန်းအမွှေးအကြိုင်ရေနံပျံ့ သူငယ်ချင်းများကိုအမြဲတမ်းငါသန့်ရှင်း haven`t ပင်လျှင်, ငါ့အိမ်သူအိမ်သားအနံ့ကိုဘယ်လိုကောင်းသောအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်! နီးပါး obsessive - ငါ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုငါသည်ငါ့အိမ်မှာတစ်ဝှမ်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ diffuse သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။...
ညဥ့်အလင်းရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ကြွေ အနံ့ပျံ့ထပ်ဆင့်တိကျတဲ့ ရေတိုင်ကီစွမ်းရည်: 100mL ရေတိုင်ကီပစ္စည်း: PP ကြွေပျံ့အရွယ်အစား: 145mm အမြင့်, 90mm အချင်း ကြွေရေနံပျံ့အလေးချိန်: အနီးစပ်ဆုံး 460g အများဆုံးစဉ်ဆက်မပြတ်ပြေးအချိန်:5နာရီ ကြွေမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့: 12 လအာမခံ ULTRASONIC ပျံ့အော်ပရေတာညွှန်ကြားချက်များ...
Led အလင်းကြွေ Air ကိုအနံ့ပျံ့မရှိမဖြစ်ရေနံ စိတ်ဖိစီးမှုကယ်ဆယ်ရေး, အံဝင်ခွင်ကျ, မျက်လုံး-ဖမ်း။ အခိုးအငွေ့အတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် Dituo ကနေအသစ်နှင့်ယဉျကြေးမှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကူကယ်ရာမဲ့ Romantic နှင့် Romantic-မှာ-နှလုံးကဒီကြွေထည်ပစ္စည်းပျံ့သင့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေတိုးတက်လာဖို့သတ်မှတ်ဘို့အင်ဂျင်နီယာ။...
တရုတ်နိုင်ငံ ကြွေပျံ့ ပေးသွင်း
1.Ultrasonic အခိုးအငွေ့ပျံ့အစားသူတို့ကိုအပူသို့မဟုတ်လည်းမီးလောင်နေဖြင့်၎င်းတို့၏မူလမော်လီကျူးတည်ဆောက်ပုံကိုဖျက်ဆီး၏, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ၏မူလထိရောက်မှုထိန်းသိမ်းထားသည်။
2. Ultrasonic Atom သူတို့ကအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ယူလိုက်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းရေနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံမော်လီကျူးဒါအလွန်သေးငယ်သောအောင်, စက္ကန့်လျှင် 2.4 သန်းအချိန်များတွင်တုန်ခါအသုံးပြုသည်။
3.Ultrasonic ရေအောက်စီဂျင်ပျံ့နှံ့ပေါများကျန်းမာ anions ထုတ်လုပ်သည်။
selection ပျံ့နှံ့ကြာချိန်နှင့်အတူ 4.Fragrance ပျံ့နှစ်ခုစစ်ဆင်ရေးသည် Modes ။
5.Ceramic ရေနံပျံ့အလင်းပျော့ illumination ထောက်ပံ့ LED ။
6.Ceramic ပျံ့အဖြစ်ကောင်းစွာတစ် humidifier အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အနံ့-ကုထုံးကို Aqua-ကုထုံးနဲ့အလင်း-ကုထုံး၏ 7.Combines ဆိုးကျိုးများ။